Madaxweynaha Somalia:: “Murugada Waan La qeybsaneynaa Kenya” | Codkamudug.com	Home
Friday, April 3rd, 2015 | Posted by Codkamudug Madaxweynaha Somalia:: “Murugada Waan La qeybsaneynaa Kenya”
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa uga tacsiyeeyay Madaxweynaha Jamhuriyadda Kenya Mudane Uhuru Kenyatta iyo shacabkiisa, weerarkii argagixiso ee maanta lagu laayey ardey iyo dad kale oo aan waxba galabsan, jaamacad ku taalla magaalada Gaarisa ee Waqooyi Bari Kenya.
‘’Anigoo ku hadlaya magaca Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, waxaan tacsi u diraya , murugadana la qeybsanayaa qoysaska iyo eheladdii dadkii sida arxandarrada ay u laayeen argagixisada shar- wadeyaasha ah. Waxan dadka dhaawacmey u rajeynayaa caafimaad buuxa oo degdeg ah’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa si kulul u cambaareeyay falkan, kuna tilmaamey mid wuxushnimo ah oo aan diin iyo dhaqan wax lug ah ku lahayn.
Waxaa uu Madaxweynahu intaa ku darey in weerarkan muujinayo sida loogu baahan yahay in la sii dardar-geliyo iskaashiga labada dal ee dagaalka lagu burburinayo kooxaha argagixisada oo gobolka iyo caalamkaba khatar ku ah.
“Waa hubaal inaan ka adkaan doonno argagixisada. Kenya waa dal aan walaallo nahay oo inoo soo gurmadey, taageeradaas ayayna kooxaha argagixisada ka soo horjeedaan. Ujeedka argagixisada waxa weeyaan inay ina niyad jebiyaan, taasina ma dhaceyso, oo waxaa inaga go’an inaan baabi’inno, si shacabka gobolkan ku dhaqan ay nabad iyo horumar u gaaraan”.
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii sheegay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay si wadajir ah u garab taagan yihiin walaallahooda reer Kenya, xilligan adag ee ay ku jiraan.